WHO - Ururka Caafimaadka Adduunka: Tallaabooyinka ilaalinta aasaasiga ah ee looga hortago cudurka 'coronavirus' - xaaladda degdegga ah ee Coronavirus
by redazione2 · 24-Mar-2020
Isku day in ad ku xirnato webka OMS si ad u hesho aqbaradka COVID-19, ama xarumaha cafimad iyo kuwa dowlada ee ku dhaw. Inta badan dadka weyka bogsooda xanuunka weyse dhacda in eey dad kale halis ku noqoto, fadlan ilaali caafimadka naftada iyo kan bulshada kaleba.
Dhaqo gacmaha inbadan
Inbadan dhaq gacmaha kuna dhaq alkol ama saabuunta gacmaha
Sabab? Qofka marku qufaco ama hindhiso waxa afkiisa kasoo baxo qooyaan yar oo anan isha qaban, hadii aad aad ugu dhawdahay waxad qadan karta laqina karta qoyaankaas oo laga yaabo in uu fiiruska kuso raaco.
Ilaali farqiga bulshada
U jirso ugu yaraan 1 mitir qofka kale hadi uu hindhiso ama qufaco.
Iska ilaali in aad tabato afka, sanka ama indhaha
Sabab? Gacmaha waxeey taabtaan meelo badan waxana laga yaba in eey soo qadan fiiruska hadii aad tabatana waxa laga yaba in aad u gudbiso jirka intiisa kale. Sida sanka ama indhaha ama afka wa melaha eey sahlan tahay in jirka usii gudbiyo.
Ilaali farqiga idin dhaxeyo oo eey neefta gaarto.
Ku dadaal in adan aad ugu dhawan qofka kale si eeysan isku gaarin neeftiina, sababto ah neefta wa laga qada, hadii aad hindhiseyso ku hindhis ama ku qufac fosaleeti ama suxulkaga oo laaban.
Sabab? Sida aan horay kuso xusnay tana wala mid oo fiiruska wuxu kaloo raaci karaa neefta qofka kasoo baxeyso afkiisa tasoo halis ah in uu u gudbiyo kan kale COVID-19.
Hadii aad isku aragto calamadaha ama shakido , joog gurigada ee wac si deg deg ah dhaqtarkaga ama kan caruurta haduu caruurta hayo ama wac nambarada gobolka uu u diyariyay gargaarka deg dega ah.